UMICA LEVI: PHANTSI KOPHONONONGO LWE-OST YELUSU - IINDABA
Phantsi kolusu OST
Umlingisi uScarlett Johansson udlala kuyo Ngaphantsi koLusu Ngumntu ongenamehlo angenanto, irhamncwa ngaphandle kwenkuthazo ebonakalayo. Akukho nto yoyikisayo ngaphezu kokududuzela komntu ongaphiliyo, ke iyavakala into yokuba uMica Levi, owabhala amanqaku efilimu, wayeza kuguqula ingqondo kaGyörgy Ligeti yoyikeka. Amanqaku anoluvo lwenkqubo yokucinga, nangona iqhutywa ngumntu ongenalo ulwalamano lwemfuzo.
UTom ulinda kakubi njengam
Umlingisi uScarlett Johansson udlala kuyo Ngaphantsi koLusu Ngumntu ongenamehlo angenanto, irhamncwa ngaphandle kwenkuthazo ebonakalayo. Akukho loyike ngakumbi ngokubonakalayo ngaphandle koloyikiso lomntu ongaphiliyo, ke iyavakala into yokuba uMica Levi, ebhala amanqaku efilimu, angabuyela kwinkosi yokoyikisa: uGyörgy Ligeti, onamandla okuqokelela uninzi lweesemitoni kwii-wisps eziguqukayo ngaphandle iziko lenziwe UkuKhanya , owawuthembele kakhulu emsebenzini wakhe Kude , yeyona movie yoyikisayo eyakha yenziwa. .
Amanqaku ayavula ngesibetho seenkumbi zetremolos eyomileyo, imitya icinezela ezantsi de isandi sifike kumgqumo. Sisandi esinobungozi obukhulu kunye nobunzima. Ukusuka apho, ukugquma kuya kuncipha, kuze kungene kumdaka phakathi kokulungiswa kwedijithali kunye nesandi esiphilayo. Kukungazithembi uLevi wasebenza nzima ukuhlakulela: 'Sasijonga isandi sendalo sesixhobo ukuzama ukufumana into ebonakalayo kuyo umntu, emva koko sinciphise izinto okanye sitshintshe isandi saso ukuze sizive singonwabanga, utshilo. UMgcini . Izinambuzane, izandi ezikufutshane nezwi ziyaqhuma kulo lonke ixesha, indawo eyomileyo ye 'Lipstick to Void,' ekhupha iBerserker yeKife Ukushukumisa isiqhelo okanye iintambo eziqhubekileyo ezivela kwiBritney Spears '' Inetyhefu '. Icandelo elifanelekileyo lomfanekiso bhanyabhanya, ohamba phakathi kwengozi kunye nokuziphatha ngokwesini kunye nokuqaqamba kweengcingo eziphakamileyo zobuchopho kunye neempembelelo ezisezantsi.
Elo lifu lothuli linyukayo, uLevi ekubhekiswa kulo 'njengendlu yenyosi' kuye kwaye Ngaphantsi koLusu Umlawuli uJonathan Glazer udliwanondlebe lwakutshanje lwePitchfork, luvela ngokuphindaphindiweyo kuwo onke amanqaku ngamanqaku ongezelelweyo kunye nee-tweaks ezimele uhambo lohlobo lukaJohansson: 'kwiNyama yeMathematika', kukho izandi ezijikelezayo zentsimbi ngasemva kwayo, ngelixa zikwi 'Mirror ukuya eVortex' -kuntywiliselwe kwisiqingatha sesandi esandisiweyo sesandi sayo. Kwimeko yefilimu, ezi zongezo zivakala ngathi kukungcamla amava aphilileyo kudaka itemplate kaJohansson, uphawu lobomi aqala ukubambana nalo njengoko ixesha lakhe eMhlabeni liqhubeka. Ukunkqonkqoza okungagungqiyo kwegubu elinye, njengonyawo olunye lokutsala, ngomnye umxholo ophindayo, unika amanqaku ukuphindaphinda, umgangatho othandabuzayo. Kangangokuba unokumenyelwa kwintloko yomlinganiswa kaJohansson Ngaphantsi koLusu , umculo uyaphakamisa. Amanqaku anoluvo lwenkqubo yokucinga, nangona iqhutywa ngumntu ongenalo ulwalamano lwemfuzo.
uphononongo olukhulu lomhla
Umculo uqhubeka ngabom nangokungazi njengefilimu enjengephupha uqobo. U-Levi uwela kwi-arch, i-three-pitch motif kwiindawo ezahlukeneyo, enye ehlala kwindawo ephezulu kakhulu, ngokungathandabuzekiyo. 'KuLonely Void', eli nani linemibala emifutshane ngesiqwengana esinomtsalane sokuvumelana kwethoni, imbonakalo eyoyikisayo yemfudumalo ezikhuhla ngokukhawuleza kodwa ishiye umbono onamandla. Kukho amanye amanqaku amafutshane okuthantamisa, ngakumbi kukubhangiswa 'kwegumbi lokulala' kunye 'nothando', eliphakamisa amanqaku ngokupheleleyo ngaphandle koxinzelelo nakwinto ephakanyisiweyo kwaye ebuhlungu. Apha, umsebenzi kaLevi usondela kuVangelis kuneLigeti, kwaye ugqibezela iarc eyimfihlakalo yefilimu. Ukuzinikela kukaLevi kwimixholo yeefilimu kuyitya yonke into, kwaye amanqaku alukhuni aboshwe kwi-DNA yefilimu kangangokuba kunzima ukuyifumana kunye namava njengealbhamu. Nangona kunjalo, ubuhle be-synths ezothusayo 'kuThando' azibuze nto kuwe kunokuba uzonwabele.
URyan adams imibala emikhulu
ukuwela ngasemva kwisigingci
todd terje lixesha lealbham
uphononongo lwelwandle olumhlophe
I-lil b basketball ibalasele
U-dave grohl njengo-david letterman